Prometeus (ngeSpanish). Umhla uGoogle aya kuthi asilawule sonke | Iindaba zeGajethi
SKukho into endiyithanda kakhulu kukuqikelela malunga nekamva ukuba liya kuba njani. Ndiyayithanda intsomi yesayensi kunye namandla okubona ababhali bayo. Ke xa ndiyibonile ividiyo "Prometeus-Uhlaziyo lweendaba", ndisenza uqikelelo olunje, andinandlela yimbi ngaphandle kokuyibeka apha ukuze abo bangekenzi njalo bonwabe.
EIvidiyo ichaza ukuba iya kuba njani ikamva elilawulwa nguGoogle nanjengoko ngesixhobo "Prometeus" Unako ukusilawula sonke.
Nokanye uphose le vidiyo, inesihloko esincinci ngesiSpanish kwaye ndiyacebisa kakhulu.
PKulabo bafuna ukufunda isicatshulwa esipheleleyo sevidiyo "Prometheus-The Media Revolution" ndibeke apha ngezantsi kwesicatshulwa esivela ecaleni kwevidiyo, kodwa ndilungisa ezinye iimpazamo zopelo ebinazo kunye nokuphucula uguqulelo olungaqhelekanga. Ndongeze amakhonkco kuzo zonke iisayithi ekuxoxwa ngazo kwividiyo:
Ukho kuzo zonke izinto, unguye wonke umntu, wazi zonke izinto.
Eli lilizwe elitsha Prometheus.
Konke kuqala ngoguquko kwimithombo yeendaba, nge-Intanethi, ngasekupheleni kwenkulungwane ephelileyo.
Yonke into malunga nemithombo yeendaba yakudala iyanyamalala: IGutenbergilungelo lokushicilela, unomathotholo, umabonwakude, intengiso.
Ilizwe elidala liyasabela: imiqobo engaphezulu kwilungelo lokushicilela, imithetho emitsha ngokuchasene neekopi ezingagunyaziswanga.
Napster uluntu "lomculo oontanga" lubekwa ityala.
Kwangelo xesha, kwi-Intanethi kuvela iiradiyo zasimahla;
TIVO, Umabonwakude okwi-Intanethi, ekuvumela ukuba uphephe ukubhengeza.
El Wall Street Journal iphuma kwi-Intanethi.
Uphando umkhonto Iindaba zeGoogle.
Izigidi zabantu zifunda elona phephandaba likhulu kwi-Intanethi yonke imihla: Ndiyabulela ebhalwe ngamawakawaka eentatheli.
Flickr iba lolona londolozo lukhulu lweefoto embalini.
Kuvela inani elitsha: the "Umthengi", umvelisi kunye nomthengi wolwazi. Nabani na unokuba "prosumer."
Amajelo aneendaba ayafumaneka kwi-Intanethi.
Iiblogi ziba nefuthe ngakumbi kwimithombo yeendaba yakudala.
Ezi ndaba zihanjiswa simahla.
Wikipedia yeyona ntyila-lwazi igqibelele eyakha yakho.
Ngo-2007 le magazini ubomi umsebenzi uyayeka.
El ENew York Times ithengisa umabonwakude wayo kwaye ibhengeza ukuba ikamva liza kuba yidijithali.
La BBC landela yona.
Kwizixeko ezikhulu emhlabeni abantu banxibelelana simahla.
Kwiikona zazo zonke iindlela, iTótems shicilela amaphepha athathwe kwiiblogi nakumaphephandaba edijithali.
Izigidi zabantu sele ziqhele amagama amaninzi kwi-Intanethi
Abantu banokuba nezazisi ezininzi kwi-Intanethi.
Ubomi be sibini yenza i-Avatar ethethayo.
Indlela endala yonxibelelwano iqalisa ubutshaba.
Intlawulo yongezwa kwipanorama nganye;
Iimagazini, oonomathotholo kunye noomabonakude zixhaswa ngezimali nguRhulumente; Ukukhuphela ngokungekho mthethweni kwi-Intanethi kohlwaywa iminyaka entolongweni.
Malunga ne-2011 kuza inqaku lokungabuyi: uninzi lotyalo-mali lwentengiso lwenziwa kwi-Intanethi.
Iidayari zombane ziyimveliso enobunzima: nabani na unokufunda nantoni na kwiphepha labo leplastiki.
Ngo-2015, amaphephandaba kunye neenkampani zikamabonwakude ziyanyamalala, umhlaba wedijithali uyashiywa, unomathotholo ugqithiselwe kwi-Intanethi.
Inkundla yemithombo yeendaba ihlala inabantu abambalwa.
Kuphela yiTyrannosaurus Rex esindayo: Inethiwekhi ebandakanya nokudibanisa wonke umxholo.
Uphando Thenga iMicrosoft, Amazon kuthengwa Yahoo, Ukuba yinkokeli yehlabathi kulwazi kunye BBC, la CNN kunye neCCTV.
Umxholo wolwazi olungashukumiyo; Njengeencwadi, amanqaku kunye nemifanekiso, iyatshintsha kwaye yonke into iguqulwe ibe kukuhamba kolwazi.
Intengiso ikhethwa ngabadali kunye nababhali kwaye iguqulwa ibe lulwazi, ukuthelekisa, amava.
Kwi 2020 Lawrence Ukufunda Umbhali we "Inkcubeko yasimahla" Uligqwetha Jikelele elitsha laseMelika kwaye ubhengeza ilungelo lokushicilela elingekho mthethweni
Izixhobo eziphindaphinda izivamvo ezintlanu sele zikho kwihlabathi elibonakalayo.
Inyani inokuphindaphindwa kwi Ubomi be sibini.
Nabani na ofuna ukuba neAgav (iarhente-avatar) okhangela ulwazi, abantu kunye neendawo kwiiHlabathi eziBonakalayo.
Kwi 2022 Uphando umkhonto Prometheus, iAgav ngonxibelelwano oluqhelekileyo.
Amazon kudala Indawo, inkampani ephindaphinda inyani.
Ungazifumana useMars, embindini wedabi laseWaterloo okanye ungqinele iSuper Bowl.
Kwi 2027 Ubomi be sibini uguqula ube nguMoya.
Abantu baba yile nto bayifunayo.
Unokwabelana ngememori, amava, iimvakalelo.
Imemori iba yinto yorhwebo oluqhelekileyo.
Kwi 2050 Prometheus thenga iNdawo noMoya.
Ubomi obubonakalayo yeyona ntengiso inkulu emhlabeni.
I-Prometeus ixhasa ngemali yonke imisebenzi yasemajukujukwini yokufumana umhlaba omtsha kubathengi bayo: ii-avatars zasemhlabeni.
Amava yinyani entsha.
Ilizwi: UFilipu K. Dick Avatar
Umhla: Epreli 6, 2051
ENdiyathemba ukuba uyithandile njengam. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Prometeus (ngeSpanish). Umhla uGoogle uya kusilawula sonke
Ividiyo enkulu, ndiyaluthanda olu hlobo lweparanoia. Iphepha elilungileyo.
Hola Umqambi Ndonwabile ukuba uyayithanda ividiyo kunye nebhlog. Ukubulisa.
Enkosi kakhulu ngokubeka sonke isicatshulwa sePrometeus kunye namakhonkco kuzo zonke iisayithi ezibonakala kwividiyo. Yigcine iviniga.
Hola Uphando ndithi UGoogel Ndiyabona ukuba ukuthandile ukunxibelelanisa isicatshulwa kunye neendawo ekubhekiswa kuzo kwaye ndiyabulela ngenkuthazo. Ukubulisa.
NDAYITHANDA IVIDIYO. NDICINGA UKUBA SIYA KUQHUBEKA NGALOLUNYE UMHLA